Chii chinonzi home economics | Economy Finance
Chii chinonzi home economics
Encarni Arcoya | 10/01/2022 15:14 | Yakagadziridzwa ku 10/01/2022 15:19 | General hupfumi
Chokwadi kanopfuura kamwe chete iwe waifanira kutambanudza muhoro wako kune kukwanisa kuwana chokurarama nacho nechikafu mufiriji yako. Kana kuti waifanira kuudza shamwari dzako kuti wanga uchirwara asi chokwadi waisakwanisa kutenga matikiti ekonsati yavaida kuenda. Izvi ichokwadi muvanhu vose nemhuri uye ine hukama nehupfumi hwepamba. Asi chii chaizvo?
Kana iwe usingazivi kuti hupfumi hwepamba chii, chii chimiro chayo, chii chaunobatanidza kana kuti ungachivandudza sei, zvirokwazvo pano uchawana ruzivo rwese rwaunoda.
1 Chii chinonzi home economics
1.1 Chii chinoratidza hupfumi hwepamba
2 Sei zvakakosha
3 Munzvimbo dzipi hupfumi hwenyika 'hunoshanda'
4 Maitiro ekuvandudza hupfumi hwepamba
4.1 Gara uchiita zvirevo
4.2 Chengetedza mwedzi wega wega
4.3 Isa zvinangwa zvekuchengetedza
Upfumi hwepamba, hunonziwo hupfumi hwemhuri, hunoreva mari, mari, kuchengetedza uye mari inoitika munzvimbo inozivikanwa diki, semhuri (nenhengo imwe kana kupfuura).
Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti ndiko kutonga kwehupfumi hwemusha nemhuri, nenzira yekuti nebhajeti zvinokwanisika kutarisana nemhando dzakasiyana dzemari, kushandiswa, kuchengetedza, mari uye zvido zvingave zviripo.
Muenzaniso wehupfumi hwepamba hunonzwisiswa nemunhu wese, pasina kupokana, kutenga kwevhiki. Bhajeti inopihwa kubva pamari inowanikwa kutenga chikafu. Nenzira yekuti kana tikapfuura, tinofanira kuderedza mari kune imwe nzvimbo kubhadhara.
El Chinangwa chehupfumi hwepamba hachisi chimwe kunze kwekuzadzisa, zvichibva pamari yaainayo, yekuzadzisa zvinodiwa nenhengo yega yega. maererano nechikafu, hutano, zvipfeko uye shangu, hutano, pekugara, nezvimwe.
Izvi zvinowira kwete chete kune munhu anowana mari, asiwo kune anozvitarisira (angave munhu mumwe chete kana mumwe). Kuti uite izvi, unofanirwa kushandisa zvishandiso uye kuzvibata nenzira yekuti iwe unogona kugutsa munhu wese uye usabuda kunze kwe "bhajeti", chimwe chinhu icho, dzimwe nguva, chinogona kuoma kwazvo.
Chii chinoratidza hupfumi hwepamba
Iye zvino zvaunoziva kuti hupfumi hwepamba chii, kuziva kuti chii chikuru hunhu hwayo hakuna kuoma. Munyaya iyi tiri kutaura nezve:
Inotariswa chete padzimba nemhuri. Izvi hazvirevi kuti kana pasina mhuri haishande; chaizvoizvo, mhuri inogonawo kuva yemunhu mumwe.
Inobva pakugadzirisa bhajeti kuti ukwanise kugovanisa mari yacho mumitengo yakasiyana, mari yauinayo uye mari yauinayo.
Inobvumira kuziva kuti ndezvipi mari uye zvikwereti izvo munhu kana mhuri inazvo uye kuisa maturusi ekuedza kudzideredza kuvandudza hupfumi.
Economics yemumba yakakosha zvikuru, uye chokwadi iruzivo runofanira kudzidziswa kubva paudiki. Fungidzira une mwana anogara achikukumbira zvinhu. Uye unodzitenga nekuti unoda kuva baba kana amai vakanaka. Dambudziko nderekuti paanenge achikura anokumbira zvinhu zvinodhura, uye ukatadza kugutsa “chihwitsi” ichocho, vana havanzwisise chikonzero chacho nekuti unenge uchigara uchivapa zvavanoda.
Ukuwo, kana ukapa mwana iyeye “muripo” womukumbira kuti, nemari iyoyo, anoitarisira uye anogona kutenga zvaanoda asi pasina imwe mari kusvikira vhiki rinotevera, unenge uchimubatsira. ona kukosha kwekushandisa wega mune izvo zvinodiwa uye zvakakosha, kwete mukushuvira, uye iwe unozoita zvirinani manejimendi.
Ndiko kukosha kwehupfumi hwepamba. Zvinokutendera dzidza kubata mari yaunayo yekuvhara mari uye kuchengetedza. Uye, kana zvikaramba, kuti ukwanise kuzvipa iwe isinganzwisisike whim kana kuidyara mubhizinesi. Asi kana waisaziva mafambisirwo azvo, waingowana mari yacho waibva watopedza wobva wapinda muchikwereti zvekutadza kuwana mari yako.
Munzvimbo dzipi hupfumi hwenyika 'hunoshanda'
Mukati mehupfumi hwemhuri, zvakakosha kufunga kuti haisi kungotarisira mari chete (bhajeti yaunayo) uye mari, asi kuti inotarisira zvikamu zvakasiyana kana nzvimbo, dzakadai se:
Zvinodhura. Zvakanyanya zvakajairika, sezvo vachigona kubva kumondi kana kurenda kweimba kana garaji, kufamba, zvipfeko, inishuwarenzi, nezvimwe.
Kushandiswa. Yakatariswa pane izvo zvakakosha mari: magetsi, mvura, chikafu ...
Investment Iyo nzvimbo inotarisa pane izvo munhu anoda kuisa chikamu chemari yake, semuenzaniso muhomwe yepenjeni.
Savings. Chikamu chemari iyoyo inochengetwa kana zviitiko zvisingafanoonekwi zvikaitika.
Maitiro ekuvandudza hupfumi hwepamba
Fungidzira kuti une muhoro we1000 euros. Uye izvo, kana iwe ukaisa mari (iyo 1000 maeuro) uye mari patafura, unoona kuti, ekupedzisira, une 1500 euros. Kureva kuti unoshandisa mari yakawanda kupfuura yaunowana.
Kana iwe wakachengeta, mumusimboti hapana chinoitika uye iwe unogona kuzvigadzirisa. Asi, kana zvisiri izvo, uye zvakajairika, iwe uri mutsvuku uye, kana kushandiswa kwakanyanya uku kukasamiswa, unogona kupedzisira warasikirwa neimba yako, mota kana kutoshoropodzwa nekusabhadhara.
Saka kuziva nzira yekuvandudza hupfumi hwepamba inoenda kuburikidza nedzidzo yezvemari Ivo havatipe iyo yaunotarisana nayo, dzimwe nguva, nenzira yakaoma.
Nzira yekuzvidzivirira sei? Nemazano aya:
Gara uchiita zvirevo
Pakutanga kwemwedzi unofanira nyora manotsi kuti uzive mari yaunowana uye kuti ndezvipi mari yaunoshandisa. Ichokwadi kuti zvimwe zvichagadziriswa uye zvimwe zvinoenderana nekuti mwedzi unoenda sei, asi nekuda kwechikonzero ichocho unofanirwa kuziva zvaunofanira kushandisa uye zvaunoshandisa.
Nenzira iyi iwe unoedza kuomerera kune iyo bhajeti yaunayo. Hapana chimwe.
Chengetedza mwedzi wega wega
Kunyange kana iri shoma, asi zvakakosha kuti chengetedza chikamu chemari yauinayo pane chero chinhu chingamuka (tsaona, basa rekuita, tenga mota ...).
Maererano nemutemo wehupfumi, unofanirwa gara uchichengetedza 20% yemari yako, kusiya makumi mashanu kune yakatarwa mari uye makumi matatu kune ayo anomuka mumwedzi. Asi kana pasina chinobuda, iyo mari inofanirawo kuenda kune yekuchengetedza, kana isiri yose, yakawanda zvayo.
Isa zvinangwa zvekuchengetedza
Sezvatinoziva kuti zvakaoma zvikuru kuchengetedza, kunyanya nemitengo inokwira uye zvinhu zvose zvinodhura zvakanyanya nemari shoma inokwira, kuisa zvinangwa zviduku zvekuchengetedza kunobatsira kusimudzira basa iri.
Uye ndizvo izvozvo Paunosangana nechinangwa, semuenzaniso kuchengetedza 1000 euros, zvinokukurudzira kuti udzokere kune chinangwa chepamusoro.. Uye kana iwe ukaona chiyero chakanaka muakaundi yako uye kuti iri kuramba ichikura, chaunoda kuramba uchiwedzera.
Hazvirevi kuti unofanira “kunamatira” uye usinganakidzwe nezvawawana uchishanda, asi kuti uve ne“musoro” uye uchengetedze mari yakakwana yemhuri yaunayo. Kuti chii chaigona kuitika.
Kuchengeta imba hakuna kuoma, iwe unongofanirwa kuzviita nenzira yakarongeka uye yakarongwa kudzivirira matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi home economics
Chii chinonzi linear economy
Chii chinonzi networking